COVID-19 gara n'ihu na-eju anya: notgba ọgwụ mgbochi abụghị mgbọ ọla ọcha
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Aviation » COVID-19 gara n'ihu na-eju anya: notgba ọgwụ mgbochi abụghị mgbọ ọla ọcha
Aviation • Njem azụmahịa • Akụkọ Ahụike • investments • Akwụkwọ akụkọ Kuwait • News • Akụkọ Na -eme Nigeria • Iwughachi • Tourism • Transportation • Ihe nzuzo Njem • trending Ugbu a • Akụkọ dị iche iche
Ọgwụ mgbochi covid-19
Richard Maslen nke CAPA - Center for Aviation, duziri ihe ngosi dị ndụ na-elekwasị anya na mpaghara ụgbọelu na Middle East na Africa.
Dị ka ọrịa coronavirus siri were ịdọ aka ná ntị rute, DNA ya na-agbanwe na mmụba na-aba ụba, na-egosi na ọ nwere ike ịga n'ihu na-eju anyị anya.
Ebe amachibidoro ala oke oke na enweghị oke njem, ọ pụtara na ụgbọ elu mba ofesi na-anọchi oke.
CAPA adọwo aka na ntị na mbata nke ọgwụ mgbochi agaghị abụ mgbọ ọla ọcha.
Okwu Richard Maslen na-eleba anya na ụfọdụ mmepe na nso nso a n'ofe mpaghara ma leekwuo anya na otu ahịa dị na nke ọ bụla. N’ọnwa a, e lekwasịrị anya na Kuwait na Naịjirịa na ihe kpatara ịgba ọgwụ mgbochi COVID-19 abụghị bọmbụ ọla ọcha. Richard malitere:
Mgbe anyị banyerechara afọ site na ikekwe nchekwube kachasị mma anyị hụrụla ọtụtụ ọnwa, eziokwu nke ọnwa abụọ gara aga echetarala anyị na ọ nweghị ihe a ga-eji gwurie egwu. Dika oria ojoo coronavirus rutere na obere ịdọ aka na ntị, DNA ya na-agbanwe na mmụba na-aba ụba, na-egosi na ebe anyị kwenyere na anyị nwere ike mechaa ghọta nghọta nke nje ahụ na-egbu egbu, ọ nwere ike ịga n’ihu na-eju anyị anya. N'ọtụtụ akụkụ ụwa, ebili mmiri ọhụrụ nke ọrịa a na-efe pụtara na n'inwe ụfọdụ nnwere onwe nwa oge, iwu siri ike abanyela ọzọ na-egbochi ije.
Site na njedebe emechiri emechi na enweghị njem dị mkpa ọ pụtara na ụgbọ elu mba na-anọgide dị oke oke. Mana, o juru anyị anya n’ezie?
Ebe a na CAPA anyị dọrọ aka na ntị na mbata nke ọgwụ mgbochi agaghị abụ mgbọ ọla ọcha. Ọ na-anọchite anya ọkwa dị mkpa maka ụwa ọhụụ post-COVID, mana nke ahụ ka dịtụ anya. Otu akụkọ dị mma n'oké osimiri nke akụkọ ọjọọ dị ka mmiri dị n'ọzara ọzara ma rafuo anyị ikwere na ndụ ga-aka mma. Ọ ga-, mana nke bụ eziokwu bụ na ọ ga-adịgide ogologo oge ma ugbu a ihe nwere ike sie ike karịa mgbe ọ bụla maka ụgbọ elu ụwa na ọtụtụ ngalaba azụmahịa ha na-arụ ọrụ dị mkpa na-akwado. Imirikiti ụgbọ elu amaliteghachila ọrụ ruo oge ụfọdụ, mana ndị a ka nọ na ọkwa dị elu karịa ndị a hụrụ tupu nsogbu ahụike ọha na eze. Mgbochi okporo ụzọ iji zere mgbasawanye nke COVID-19 na ebili mmiri ọzọ na-ebute ọrịa na-aga n'ihu na mgbake mba ụwa, ọ bụ ezie na njem ụlọ gosipụtara egosiputa ihe ngosi dị mma nke mgbake.
Middle East na-emetụta oke mgbochi njem njem mba ụwa na-aga n'ihu yana ụgbọ elu ya kachasị ukwuu na-arụ ọrụ na netwọkụ na-agbasa n'ụwa niile ma dabere na ndị njem mba ụwa.
Page 1 nke 7 Na Mbụ Osote
Jamaica Ekeresimesi na July Ihe Omume Mee maka July 22
Ọtụtụ mmadụ merụrụ ahụ na mgbawa ụgbọ ala Russia
Flightsgbọ elu ọhụrụ n'ime Jamaica dị mkpa maka mgbake njem nlegharị anya ...